Nor Naw | Myanmar Online Mp3
Home » Archives by category » Alternative » Nor Naw	Nor Naw – Sayar Kyi Nae Thu Ei Ta Paeh Myar	May 19, 2016 by MMp3	Comments Off on Nor Naw – Sayar Kyi Nae Thu Ei Ta Paeh Myar
Myanmar famous rocker Nor Naw’s “Sayar Kyi Nae Thu Ei Ta Paeh Myar” နောနော် – ဆရာကြီးနဲ့သူ၏တပည့်များ Album…
Nor Naw	Read More Nor Naw: A Tine Htet A Lon အတိုင်းထက်အလွန် Mp3 Album	February 1, 2014 by MMp3	6 Comments
Myanmar Mp3 – Nor Naw: A Tine Htet A Lon အတိုင်းထက်အလွန် Mp3 Album – Myanmar Rocker Nor Naw’s first single album အတိုင်းထက်အလွန် Mp3 Album, Nor Naw free mp3 album, Nor Naw Mp3 and Nor Naw Songs are available to listen free here. ဝိညာဉ်, အတိုင်းထက်အလွန်, မင်းမသိဘူး, သံချေးတတ်နေ့တွေ, ပြန်ဆုံကြမယ်, ဘဝနှစ်ခု, မျဉ်း, မတန်ဘူး, နာသုံးနာ, လက်တော်ထဲ No Song Title Download…
Nor Naw	Read More Nor Naw: Eain Mat Hte Kah Lu အိမ်မက်ထဲကလူ Mp3 Album	November 24, 2013 by MMp3	8 Comments
Myanmar Mp3 – Nor Naw: Eain Mat Hte Kah Lu အိမ်မက်ထဲကလူ Mp3 Album – Myanmar Rocker Nor Naw mp3, Nor Naw songs, Nor Naw Albums, အိမ်မက်ထဲကလူ – နောနော် free online mp3album is available to listen here. ဖက်ထားမယ်, တံခါးပိတ်လိုက်ပါဦး, အဖြည့်ခံ, ဘွဲ့, ပြောင်းလဲမသွားဘူး, အိမ်မက်ထဲကလူ, တော်ပြီနောက်, ငါနဲ့မင်း, ဆက်သွယ်မှုဧရိယာပြင်ပ, ပျံသန်းခြင်း, ကမ်းနဲ့ဝေး, ဘယ်သူလဲ No Song Title Download ၀၁ ဖကျထား​မယျ Download…
Nor Naw	Read More Nor Naw: A Kant Tat Ma Shih အကန့်အသတ်မရှိ Mp3 Album	November 21, 2013 by MMp3	3 Comments
Myanmar Mp3 – Nor Naw: A Kant Tat Ma Shih အကန့်အသတ်မရှိ Mp3 Album – Myanmar Famous Rock Singer Nor Naw’s 2nd single album အကန့်အသတ်မရှိ Mp3 Album, Nor Naw free mp3, Nor Naw Songs and Nor Naw online mp3 are available to listen here. Intro, ကြိုး, အကန့်အသတ်မရှိ, မွန်မြတ်ခြင်း, ပုံသွင်းပစ်မယ်, မလှည့်စားနဲ့, နိဒါန်း, မဟုတ်ဘူး, ဘယ်တော့မှ တို့မဝေးဘူး, အေးဆေးပဲ, လူသားတိုင်း…
Nor Naw	Read More Nor Naw – Lay Lay Net Net Mp3 Album	November 21, 2013 by MMp3	6 Comments
Listen to download Free Myanmar Online Mp3 Music – Myanmar famous Rocker Nor Naw’s latest album Lay Lay Net Net (လေးလေးနက်နက် – နောနော်) mp3 album is available here. Nor Naw – Lay Lay Net Net Mp3 Album ၀၁။ ​ကေနြပျတယျ ၀၂။ ဒီထကျပွိုပီး​ ၀၃။ ​လေဟာနယျ ၀၄။ ခဏမကျြစိမှိတျွပီး​ ၀၅။ ညခဈြသူ ၀၆။ ရိုး​ရိုး​လေး​ပဲ ၀၇။ အဆိပျနဲ့​လူ ၀၈။ မလာခငျြပါနဲ့​ ၀၉။ ဆုံး​ရှုံး​ ၁၀။ အသညျး​ကှဲမိုကျကရိုဖုနျး​ ၁၁။ စဉျး​စား​ ၁၂။ မှား​တယျ ၁၃။ ​လေး​လေး​နကျနကျ…
Nor Naw	Read More Say Loe Ya Say Mp3 Album	March 16, 2013 by MMp3	9 Comments
Myanmar Online Mp3 Music of နောနော် ၊ ဂျီလတ် ၊ ဖိုးသား Myanmar Rock, Alternative, Modern Rock singers Naw Nor, G Latt and Phoe Ta’s combination album Say Loe Ya Say (စေလိုရာစေ – နောနော် ၊ ဂျီလတ် ၊ ဖိုးသား Album) free online listening and free download is available here. စေလိုရာစေ – နောနော် ၊ ဂျီလတ် ၊ ဖိုးသား Album စေလိုရာစေ –…
G-Latt // Nor Naw	Read More CategoriesCategories
Top Albums	ဝေလ - 1982 Album	Myo Gyi - Min Shi Tae Myo Mp3 Free Download	ဝေလ – မိတ်ကပ်မကြိုက်သောသီချင်းများ Album	Nini Khin Zaw - Mario Mp3 Album	Mi Sandi - Pyitdaing Thaung Album	Myo Gyi - Change Album	Ah Nge: Zit Myit ဇစ်မြစ် Mp3 Album	Myo Gyi - Lay Pyay Mp3 Album	Myanmar Music	Myanmar Music